Trailer ngwa ngwa na oke iwe 9 Trailer abịarute - Pop Culture
Ọhụrụ ngwa ngwa & iwe ọkụ 9 Trailer dị ebe a
Vidiyo pụọ Saga ngwa ngwa
kedu ka esi eme chacha chocolate ganache
Ngwa ngwa & amp; Ezigbo iwe 9 na -abịarute n'ụlọ ihe nkiri n'oge ọkọchị a ọtụtụ oge. Tupu mwepụta ya, Universal Pictures agbadala nnukwu ụgbọala na -adọkpụ nke na -egosipụta nlọghachi ụfọdụ ihu ndị ọ maara.
Dị ka ihe nkiri na-adọkpụ ihe nkiri gara aga, nke webatara John Cenas ajọ Jakob Toretto, nlele nke abụọ anyị F9 na -egosi etu usoro ihe a siri mee karịa ka ọ ga -esi mebe mwube ya niile. Tyrese Gibsons Roman Pearce na -ewekwa obere oge iji depụta ọrụ mkparị ha nọla ugbu a, mana ọ nweghị onye n'ime ha atụnyere etu ụlọ ihe nkiri kacha ọhụrụ si mechie.
Vin Diesels Dom tụgharịrị nwanne ya nwoke Jakob, ma ugbu a, ndị ọrụ ụgbọ mmiri niile kwesịrị imekọ ihe ọnụ iji mee ka ya na Charlize Therons Cipher gbadaa. Nke ahụ gụnyere iwere onye Sung Kangs hụrụ n'anya bụ Han Lue, onye echere na e gburu ya na 2006 atọ. Okporo ụzọ Tokyo . Ndị na-emekọ ihe ọnụ Lucas Black, Bow Wow, na Jason Tobin sonyekwara ọkụ mmụọ, ha niile pụtara na ntinye nke atọ nke franchise, nke na-amasị F9 Ọ bụkwa Justin Lin duziri ya.
Ndị na-eme ihe nkiri a teela ya aka Ngwa ngwa 9 ga -egosipụta usoro edoziri n'usoro oghere, ebe ihe nkiri ahụ na -ejedebe na nlele nke ahụ. Ọ dị mma, anyị enyochala Tyrese na Ludacris na-aga na mpụga ikuku ụwa nke dị ka ụgbọ ala nke rọketi gbara. E nwere n'ezie na -agbagha ndị otu okike n'azụ franchise a, n'ihi na ha maara nke ọma ihe ndị na -ege ntị chọrọ. Onye na -adọkpụ ụgbọala anaghị enye nlele maka agwa Cardi Bs.
N'ime otu N'ajụjụ ọnụCollider , A jụrụ Justin Lin ma ọ bụrụ na ndị na -akwado ya enwee ike ịhụ obe n'etiti Ngwa ngwa & amp; Ezigbo iwe na Ụwa Jurassic nyere na franchise abụọ ahụ bụ nke Universal, nke ọ zara, sị, anaghị m ekwu ihe ọ bụla. Akụkụ nke nkà ihe ọmụma anyị agaghị abụ igbe ma ọ bụ kpọọ ya aha. Nke ahụ bụ ihe m ga -ekwu.
Michelle Rodriguez nwekwara mmasị maka ya. Abịala m! Ozugbo ị ruru ebe dị elu, ọ nweghị ebe ị ga -aga, mana ịgabiga akara na ijikọ… Naanị ihe na -eguzo n'ụzọ bụ ndị ọka iwu na ụlọ ihe nkiri. Ọtụtụ mgbe, ụdịrị ị na -agbalị ijikọ bụ nke ụlọ nka dị iche iche. Mana ọ bụrụ n'okpuru otu nche anwụ, amaghị m. Naanị m na -ekwu, ọ na -arụ ọrụ.
ndị agha ikuku elu dị elu nwere eriri na azụ
Enwetaghị ọhụrụ Ngwa ngwa & amp; Ezigbo iwe 9 ụgbọala na -adọkpụ dị n'elu, lezienụ anya maka ihe nkiri ahụ mgbe ọ kụrụ ihe nkiri na June 25, 2021.
esi akpọọ nkụ achicha achicha
onye egwuregwu basketball kacha mma n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị
mere ọdịnihu na scottie pippen nwunye
gbochie ịnụ ọkụ n'obi gị anya eyez killa